ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ - ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ - Bago Regional Government
Home / ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ အနေဖြင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းတွင် တိုင်းဒေသကြီး ရုံးခွဲ၊ ပဲခူးခရိုင်၊ တောင်ငူခရိုင်၊ ပြည်ခရိုင်၊ သာယာဝတီခရိုင်ရုံးခွဲများကို (၅-၁၂-၂၀၁၂)နေ့ တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(၁)ဦး၊ ဦးစီးအရာရှိ(၃)ဦးတို့ဖြင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၄ခုနှစ် မတ်လတွင် ဒုတိယ စာရင်းအင်းမှူး(၇)ဦးတို့ကို ဖြည့်စွက်ခန့်ထားခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ် သြဂုတ်လမှစတင်၍ ပဲခူးမြို့နယ်၊ ညောင်လေးပင် မြို့နယ်၊ တောင်ငူမြို့နယ်၊ ဖြူးမြို့နယ်၊ ပြည်မြို့နယ် တို့တွင် မြို့နယ်ရုံးခွဲများ ထပ်မံတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ် ထားရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် ရွှေကျင်၊ ကျောက်ကြီး၊ ပေါက်ခေါင်း၊ ပေါင်းတည်၊ဇီးကုန်း၊ အုတ်ဖိုမြို့များမှအပ မြို့နယ် (၂၁)မြို့နယ်တွင် ဒုတိယစာရင်းအင်းမှူး(၁)ဦးစီ ခန့်ထား၍ စီမံကိန်းရုံးများ၊ စုပေါင်းရုံး များတွင် တွဲဖက်၍လည်းကောင်း၊ အိမ်ငှားရမ်း၍လည်းကောင်း ရုံးခန်းဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပြီး ကျန်ရှိသည့် မြို့နယ်များတွင်လည်း ဆက်လက်ခန့်ထားနိုင်ရန် အတွက် ရုံးချုပ် မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ လက်ရှိတွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(၅)ဦး၊ ဦးစီးအရာရှိ(၆)ဦး၊ ဒုတိယစာရင်းအင်းမှူး(၂၅)ဦး ၊ စုစုပေါင်း၀န်ထမ်းအင်အား(၃၆)ဦးတို့ဖြင့် အလုပ်တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်လျက် ရှိနေ ပါသည်။
တိုင်းစီမံကိန်းရုံးအဆောက်အဦအတွင်း၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ဥဿာမြို့သစ်၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၆)၊ ပဲခူးမြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။
ဖုန်း / ဖက်စ် : ၀၅၃-၂၂၃၀၉၀၀
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၏ မူဝါဒ ရည်မှန်းချက်
၁။ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့သည် နိုင်ငံတော်၏ လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စီမံကိန်းချမှတ် ရာတွင် အခြေခံအသုံးပြုရန်လိုအပ်သော ပြည့်စုံခိုင်မာသည့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ကောက်ယူစုစည်း၍ လူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေများကို စာရင်းအင်းများ၊ ညွှန်ကိန်းများဖြင့် တင်ပြလျက်ရှိပါသည်။ စာရင်းအင်းအချက်အလက် မှန်ကန် ရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်၀သော စာရင်းအင်းစနစ်ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက် ရည်မှန်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။
၂။ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၏ မူဝါဒများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
(က) စာရင်းအင်းအရည်အသွေးပြည့်၀သော စာရင်းအင်းစနစ် ပြည့်စုံတိကျ မှန်ကန် စေရေးအတွက် လူမှု-စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ ညွှန်ကိန်း များကို ပြည့်စုံအောင် တွက်ချက်ဆောက်ရွက်နိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား စာရင်းအင်း စနစ် ပေါ်ပေါက်လာစေရန်၊
(ခ) အစိုးရဌာန၊ သမဝါယမ၊ ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းအားလုံး မှ တစ်မျိုးသားလုံး၏ စာရင်းအင်းအား ခြုံငုံသည့် လိုအပ်သော စာရင်းအင်းများ ကို ပံ့ပိုးမှုရရှိနိုင်ရန်၊
(ဂ) အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီး နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် အများပြည်သူတို့ အသုံးပြု နိုင်ရန်အတွက်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များဆောင်ရွက်ရာတွင်လွယ်ကူချောမွေ့ စေရန်၊
(ဃ) စာရင်းအင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော ဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ အကြား ထိရောက် မြန်ဆန်စွာ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုအားကောင်းစေရန်၊
(င) အရည်အသွေးပြည့်ဝပြီး တိကျမှန်ကန်သည့် စာရင်းအင်းများကို ရရှိ အသုံးပြု နိုင်ခြင်းအားဖြင့် အစိုးရနှင့် ပြည်သူများအကြား၊ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း များအကြား ယုံကြည်မှု တိုးမြှင့်စေရန်၊
(စ) အသစ်ပြဌာန်းမည့် မြန်မာနိုင်ငံ စာရင်းအင်းဥပဒေနှင့်အညီ အာဏာသက်ရောက်မှု ကျယ်ပြန့်ထိရောက်လာစေရန်နှင့် အဆိုပါစာရင်းအင်းဥပဒေအရ ယုံကြည်ကိုး စားနိုင်သော၊ ခိုင်မာ၍အရည်အသွေးရှိသော စာရင်းအင်းများကို အချိန်နှင့် တစ်ပြေး ညီ စုစည်းကောက်ယူနိုင်ရန် အမျိုးသား စာရင်းအင်းကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးမှု မဟာဗျူ ဟာ (National Strategy for Development ofStatistics- NSDS) ဖော်ဆောင်၍ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်သွားမည့် လုပ်ငန်းများ ကျယ်ပြန့်စွာ တိုးမြှင့်အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တို့ဖြစ်ပါသည်။
To emerge the National Statistical System that can be carried out socio-economic indicators and indexes for accuracy and quality of statistics;
To support the necessary statistics which can National Comprehensive Statistics from government departments, cooperative, private orga – nizations and enterprises;
To facilitate and be effective in statistical process for using government and public ;
To enhance the cooperation effectively among statistical departments and organizations;
To upgrade the trust building among government, public and inter national community by using accurate and quality of statistics;
To spread the statistical authority in accordance with new Myanmar Statistical Law, to collect and compile the reliable and quality of statistics timely according to this Law, and to enhance the implementation tasks of National Strategy for Development of Statistics- NSDS.
၃။ ရည်မှန်းချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
စာရင်းအင်းအရည်အသွေး ပြည့်ဝစေရေးနှင့် စာရင်းအင်းစနစ် ပြည့်စုံတိကျ မှန်ကန် စေရေး အတွက် လူမှု-စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ ညွှန်ကိန်းများကို ပြည့်စုံအောင် တွက်ချက် ဆောက်ရွက်နိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ် ပေါ်ပေါက်လာစေရန်၊
” To emerge the National Statistical System that can be carried out socio-economic indicators and indexes for accuracy and quality of statistics. “
(က)ဈေးနှုန်းစာရင်းများ စုစည်း တင်ပြခြင်း
၄။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အိမ်ထောင်စု၀င်ငွေနှင့်စားသုံးမှုစစ်တမ်း ၂၀၀၆ ခုနှစ် ကို အခြေခံ၍ ပဲခူးမြို့နယ်၊ တောင်ငူမြို့နယ်၊ ညောင်လေးပင်မြို့နယ်၊ ပြည် မြို့နယ်၊ ပန်းတောင်း မြို့နယ်၊ အုတ်ဖိုမြို့နယ်များရှိ အခြေခံစားကုန်ပစ္စည်း(၁၉၂)မျိုးတို့၏ လက်လီဈေးနှုန်းများကို အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့တိုင်း ကောက်ယူစုစည်းပြီး ကုန်ပစ္စည်း(၁၅၈)မျိုးတို့၏ လက်လီစျေးနှုန်းများကို အပတ်စဉ်ရုံးချုပ်သို့ ပေးပို့၍ စားသုံးသူစျေးဆနှုန်းကိန်း-CPI (Consumer Price Index)ကို လစဉ်တင်ပြတွက်ချက်ခဲ့ပါသည်။ စားသုံးမှု အများဆုံး ဖြစ်သော အခြေခံစားကုန် ကုန်ပစ္စည်း (၁၇)မျိုးတို့၏ အပတ်စဉ်စျေးနှုန်း အတက်အကျ တို့ကိုလည်း နှိုင်းယှဉ် ပေးပို့လျက်ရှိပါသည်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်)ပြည်မြို့ ၏ လက်ကား ဈေးနှုန်းများကို ကောက်ယူစုစည်း၍ လစဉ် ရုံးချုပ်(နေပြည်တော်) သို့ ပေးပို့တင်ပြလျက်ရှိပါသည်။
၅။ အိမ်ထောင်စု၀င်ငွေနှင့်စားသုံးမှုစစ်တမ်း(၂၀၁၂) ခုနှစ်ကိုအခြေခံ၍ ပဲခူးမြို့နယ်၊ သနပ်ပင်မြို့နယ်၊ ညောင်လေးပင်မြို့နယ်၊ ကျောက်တံခါးမြို့နယ်၊ တောင်ငူမြို့နယ်၊ ပြည်မြို့နယ်၊ ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်၊ အခြေခံ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်း(၁၆၇)မျိုးတို့၏ လက်လီဈေးနှုန်းများကို ကောက်ယူ စုစည်း၍ နေပြည်တော်ရုံးချုပ်သို့ တင်ပြလျက်ရှိပြီး စားသုံးသူစျေးဆနှုန်းကိန်း- CPI (Consumer Price Index) လစဉ်တွက်ချက်ခြင်းကို ၂၀၁၆ခုနှစ် မတ်လမှစ၍ ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ပြီးဆောင်ရွက် လျက်ရှိ ပါသည်။
(ခ) မွေးဖွားသူနှင့်သေဆုံးမှုစာရင်းများ စုစည်း တင်ပြခြင်း
၆။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ မွေးဖွားခြင်း သေဆုံးခြင်း မှတ်ပုံတင်ခြင်းစနစ် ပိုမိုအားကောင်း လာစေရန်နှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်အတန်းမီသော စနစ်ဖြစ်ပေါ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာနမှ လစဉ်ပေးပို့သော မွေးဖွားသူ နှင့်သေဆုံးသူများအား မွေးစာရင်း/ သေစာရင်း ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု လချုပ်စာရင်းများကို စုစည်း၍ ရုံးချုပ်(နေပြည်တော်)သို့ ပေးပို့တင်ပြပါသည်။
(ဂ) ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့ကျရေးဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်းများ စုစည်း တင်ပြခြင်း
၇။ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေး လုပ်ငန်းကော်မတီအား အထောက်အကူပြု ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ ကောက်ယူ စုဆောင်းရေးနှင့် စိစစ်အကဲဖြတ်ရေးလုပ်ငန်း ဆပ်ကော်မတီအားဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိရာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့အနေဖြင့် စာရင်းအင်း အချက်အလက်များ ကောက်ယူ စုစည်းတင်ပြရန်၊ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ များကို စိစစ်အကဲဖြတ် ပေးရန်၊ ကဏ္ဍအလိုက်၊ ဒေသအလိုက် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေး လုပ်ငန်းစဉ်တိုးတက်မှု အခြေအနေများကို စာရင်းကောက်ယူ စု ဆောင်းရန်၊ လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားရန်၊ လိုအပ်ပါက လုပ်ငန်း ကော်မတီ၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက် သွားရန်စသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အဓိကထား ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချ ရေး လုပ်ငန်းနယ်ပယ်(၈)ခုနှင့် ပတ်သက်သည့် –
(၁)လယ်ယာကုန်ထုတ် လုပ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ညွှန်းကိန်း (၁၁) ခု
(၂)သားငါးထုတ်လုပ်မှုနှင့် ကျေးလက်လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ညွှန်ကိန်း (၄၄) ခု (၃)ကျေးလက် အသေးစားကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ညွှန်ကိန်း (၃) ခု (၄)အသေးစားပုဂ္ဂလိက ငွေစု ငွေချေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးညွှန်ကိန်း (၃) ခု (၅)သမဝါယမလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် ရေးညွှန်ကိန်း (၂) ခု (၆)ကျေးလက်စွမ်းအင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးညွှန်ကိန်း (၅) ခု
(၇) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးညွှန်ကိန်း (၅) ခု
၈။ စုစုပေါင်းညွှန်ကိန်း(၇၃)ခုအား ကဏ္ဍအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီများ၊ ဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်၍ သုံးလပတ်စာရင်းနှင့် နှစ်ချုပ်စာရင်း များပြုစုပြီး စာရင်းအင်း အချက်အလက်မှန်ကန်ရေး နှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝရေး ဆပ်ကော်မတီနှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ အစိုးရအဖွဲ့သို့ ပုံမှန်ပေးပို့ တင်ပြခဲ့ပါသည်။
၉။ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ နှင့် ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ်များအတွက် လူမှုစီးပွားအညွှန်းကိန်းစာရင်းများ (ညွှန်ကိန်း-၇၀)ကို နှစ်စဉ်နေပြည်တော်ရုံးချုပ်မှတိုက်ရိုက်တောင်းခံခဲ့ပါသည်။ ဗဟိုစာရင်းအင်း အဖွဲ့သည် နယ်ရုံးခွဲများဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် အချိန်မှစ၍ ၂၀၁၂-၂၀၁၃မှ ယခုအချိန်ထိ သုံးလတစ်ကြိမ်နှင့် နှစ်ချုပ်စာရင်းများကို နှစ်စဉ်တောင်းခံ စုစည်းတင်ပြ လျက်ရှိပါသည်။
၁၀။ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များ၏ လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများ(ဇယား-၉၁)ကို ၂၀၁၅ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှစတင်၍ သုံးလပတ်အလိုက် အောက်ဖော်ြပပါ အညွှန်းကိန်း များ ကိုစုစည်းလျက်ရှိပါသည်-
တိုင်း/ခရိုင်/မြို့နယ်ရုံးများတွင် ထားရှိရသည့် လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာအခြေခံစာရင်းအင်းများမှာ
ဇယား-၁။ လူဦးရေနှင့် လူဦးရေတိုးတက်မှုနှုန်း။ မြို့နယ်အတွင်း လ/နှစ် အလိုက် နေထိုင်လျက်ရှိသည့် လူဦးရေကို ကျား/မ အလိုက်စာရင်း ( အစီရင်ခံသည့်လ တွင် အမှန်တကယ် ရှိသည့် လူဦးရေ)
ဇယား-၂။ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် လူဦးရေ၊ ဧရိယာနှင့် လူဦးရေသိပ်သည်းမှု။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်း ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် နေထိုင် လျက် ရှိသည့် လူဦးရေ (ကျား/မ)အလိုက် ၊ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ဧရိယာကို စတုရန်းမိုင်၊ နေထိုင်သည့် လူဦးရေ နှင့် ဧရိယာ အကျယ်အဝန်းအရ တစ်စတုရန်း မိုင် တွင် နေထိုင်လျက်ရှိသည့် လူဦးရေသိပ်သည်းမှု
ဇယား-၃။ အသက်အုပ်စုအလိုက် လူဦးရေနှင့် ကျား/မအချိုး။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ် အတွင်း အသက်အုပ်စု အလိုက် ကျား၊မ လူဦးရေနှင့် ကျား/မအချိုး
ဇယား-၄။ နိုင်ငံခြားသား မှတ်ပုံတင်ဖြင့် နေထိုင်သော လူဦးရေ အခြေအနေ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်း နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ဖြင့် နေထိုင်သော လူမျိုး အလိုက် ကျား၊မ လူဦးရေနှင့် ကျား/မအချိုး
ဇယား-၅။ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေး။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်း အလုပ်အကိုင်နှင့်ပတ်သက်၍ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၌၏ အသစ် လာရောက်မှတ်ပုံတင်သူများ၊ အလုပ်အကိုင်လစ်လပ်မှု၊ အလုပ်ခန့်ထားနိုင်မှုနှင့် နှစ်ကုန်အခြေအနေ ၊လူမှုဖူလုံရေး အဖွဲ့တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အလုပ် သမား ဦးရေ၊ အထွေအထွေ အာမခံကြေး ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မှု အာမခံ ထုတ်ပေးမှု အခြေအနေများ
ဇယား-၆။ မွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှု ဆိုင်ရာ စာရင်းအင်း။မွေးဖွားမှုနှင့် သေဆုံးမှုဆိုင်ရာ စာရင်း များဖြစ်သည့် မွေးဖွားမှု၊ သေဆုံးမှု၊ အသေမွေးဦးရေ၊ တစ်နှစ်အောက် ကလေး သေဆုံးမှု၊ ငါးနှစ်အောက် ကလေးသေဆုံးမှုနှင့် သားဖွား မိခင်သေဆုံးမှု အခြေအနေကိုလအလိုက်၊ မြိုပြ ကျေးလက် အလိုက်၊ (ကျား၊မ )စာရင်း
ဇယား-၇။ မြေယာအသုံးချမှုအခြေအနေ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ စုစုပေါင်းမြေ ဧရိယာ၊ စုစုပေါင်း စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ၊ အသားတင်စိုက်ပျိုးမြေ ဧရိယာ၊ လှပ်မြေ၊ စိုက်ပျိုးခြင်း မပြုနိုင်သောမြေ၊ တောရိုင်းမြေ၊ မြေရိုင်း၊ ကြိုးဝိုင်းကြိုးပြင် ကာကွယ် တောမြေ၊ စုစုပေါင်း စိုက်ပျိုးမြေတွင် အသားတင် စိုက်ပျိုးမြေပါဝင်မှု၊ ရေသွင်း စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်သည့် တောင်သူ လယ်သမား ဦးရေ
ဇယား-၈။ သီးနှံအမျိုးအစားအလိုက် စိုက်ပျိုးထွက်ရှိမှုအခြေအနေ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်း အဓိကသီးနှံအမျိုးအစားအလိုက် စိုက်ဧက၊ ရိတ်သိမ်းဧကနှင့် စုစုပေါင်းအထွက်
ဇယား-၉။ သစ်သီးပင်များ။အစီရင်ခံသည့်လတွင်မြို့နယ်အတွင်းထွက်ရှိသောသီးနှံ အမျိုးအစား အလိုက် စာရင်း
ဇယား-၁၀။ သီးနှံပေါ်ချိန် စျေးနှုန်းများ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင်မြို့နယ် အတွင်းအဓိက သီးနှံအမျိုးအစားအလိုက် သီးနှံပေါ်ချိန် တွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် စျေးနှုန်းများ စာရင်း
ဇယား-၁၁။ ဆည် မြောင်း၊ တာ တမံများ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်း နိုင်ငံပိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဆည်မြောင်း၊ တာတမံများနှင့် ရေပေးဝေနိုင်သည့် ဧက
ဇယား-၁၂။ ဆည်မြောင်းတာတမံများမှရေသွင်း/ရေတင်ဆောင်ရွက်ခ များ/အခွန်အခများ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ် အတွင်းရှိ နိုင်ငံပိုင်၊သမဝါယမပိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိက ပိုင် ဆည်မြောင်းနှင့် တာတမံများ၊ ရေသွင်း/ ရေတင် ဆောင်ရွက်ခ/အခွန်အခများ( ဧက အလိုက် )
ဇယား-၁၃။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးမှုဆိုင်ရာစက်ကရိယာများ။ အစီရင်ခံသည့်လ တွင် မြို့နယ် အတွင်း ရှိ လယ်ထွန်စက်၊ လက်တွန်းထွန်စက်၊ ကောက်စိုက်စက်၊ မျိုးစေ့ချစက်၊ စပါးရိတ် စက်၊ စပါးချွေလှေ့စက်၊ ရိတ်သိမ်း ချွေလှေ့စက်၊ ရေစုတ်စက် စသည့် စိုက်ပျိုးရေး စက်ကရိယာများ
ဇယား-၁၄။ ဓါတ်မြေသြဇာနှင့် ပိုးသတ်ဆေး အသုံးပြုမှုစာရင်း။ အစီရင်ခံသည့်လ တွင်မြို့နယ်အတွင်း ရှိဓါတ်မြေသြဇာ နှင့် ပိုးသတ်ဆေး အသုံးပြုမှုအခြေအနေ
ဇယား-၁၅။ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူမှု။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်း မွေးမြူသည့် ကျွဲ၊ နွား၊ သိုး၊ဆိတ်၊ ဝက်၊ ကြက် စသည့် တိရစ္ဆာန်များ အခြေအနေ
ဇယား-၁၆။ ငါး/ ပုစွန် မွေးမြူရေးကန်နှင့် ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ ငါး/ပုစွန်မွေးမြူရေးကန်ဦးရေနှင့် မွေးမြူသည့်ဧက၊ ငါး/ ပုစွန်ထုတ်လုပ်မှု အခြေအနေနှင့် ငါး/ပုစွန်သားပေါက် ထုတ်လုပ်မှုအခြေ အနေ
ဇယား-၁၇။ အသားနှင့် ဥ ထုတ်လုပ်မှု အခြေအနေ။ အစီရင်ခံသည့် လတွင် မြို့နယ်အတွင်း အသား နှင့် ဥ ထုတ်လုပ်မှု အခြေအနေ
ဇယား-၁၈။ မွေးမြူရေးခြံများ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင်မြို့နယ်အတွင်း စီးပွားဖြစ် မွေးမြူလျက် ရှိသည့် မွေးမြူရေးခြံ အရေ အတွက်နှင့် မွေးမြူသည့်ကောင်ရေ အခြေအနေ
ဇယား-၁၉။ တိရစ္ဆာန်ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ပေးခြင်းနှင့် ကုသပေး နိုင်မှု အခြေအနေ။ အစီရင်ခံသည့် လတွင် မြို့နယ် အတွင်းမွေးမြူလျက်ရှိသည့် တိရစ္ဆာန်များအား ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်ပေးခြင်းနှင့် ဆေးကုသပေးနိုင်မှု အခြေ အနေ
ဇယား-၂၀။ သစ်တောကဏ္ဍဆိုင်ရာစာရင်းအင်းများ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ သစ်တော ကဏ္ဍဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများဖြစ်သည့် သစ်တောဧရိယာ၊ သစ်တောထွက် ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု၊ သစ်တော စိုက်ခင်းများ၊ သစ်ခွဲစက်များစသည့် အခြေအနေ
ဇယား-၂၁။ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် ပုဂ္ဂလိကပိုင် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိကပိုင် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအား လုပ်ငန်း အမျိုးအစား (၁၃)ခု ခွဲခြားပြီး ကြီး၊ လတ်၊ ငယ် အခြေအနေ
ဇယား-၂၂။ ပုဂ္ဂလိကပိုင် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်း ရှိ ပုဂ္ဂလိကပိုင် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ အား လုပ်ငန်းအမျိုးအစား (၁၃)ခု ခွဲခြားပြီး လုပ်ငန်း အမျိုးအစားလိုက် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည့် စက်ရုံ အမည်များ
ဇယား-၂၃။ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများစာရင်း။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ လုပ်ငန်း ဆောင် ရွက်လျက်ရှိသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းများ အခြေအနေ ကို လုပ်ငန်းအမည်၊ ပိုင်ရှင် အမည်၊ လုပ်ငန်း အမျိုးအစား၊ လုပ်သားဦးရေနှင့် လုပ်ငန်း တည်နေရာ
ဇယား-၂၄။လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက်ပုဂ္ဂလိကပိုင်စက်ရုံအလုပ်ရုံများ၏ထုတ်လုပ်မှု။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ MSIC Rev-4 အရ လုပ်ငန်း အမျိုး အစားအလိုက် ပုဂ္ဂလိကပိုင် စက်ရုံ အလုပ်ရုံ များ၏ထုတ်လုပ်မှု အခြေ အနေ
ဇယား-၂၅။ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက်ပုဂ္ဂလိကပိုင်စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံများ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင်မြို့နယ်အတွင်းရှိပုဂ္ဂလိကပိုင်စက်ရုံအလုပ်ရုံများ၏ထုတ်လုပ်မှု အခြေအနေကို လုပ်ငန်းအမျိုးအစား(၁၃)ခု ခွဲခြားပြီး ထုတ်လုပ်သည့် အမျိုးအမည် အလိုက် အခြေအနေ
၆။ စွမ်းအင်၊ သတ္တုနှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများ
ဇယား-၂၆။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုနှင့်သုံးစွဲမှု ။အစီရင်ခံသည့် လတွင် မြို့နယ် အတွင်းရှိ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေထုတ်လုပ်မှုအမျိုးအစား အလိုက်(ရေအား၊ သဘာဝဓါတ်ငွေ့၊ ဒီဇယ်၊ ရေနွေးငွေ့ စသည်ဖြင့်) လည်း ကောင်း၊ သုံးစွဲမှုတွင် စက်ရုံ၊ အိမ်၊ ရုံးကျောင်း နှင့် လျှပ်စစ်မီး ရရှိသော အိမ်ထောင်စု၊ လျှပ်စစ်မီးရရှိသော ကျေးရွာ
ဇယား-၂၇။ တပ်ဆင်ထားသည့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားအမျိုးအစားနှင့် တပ်ဆင်ထားသည့် ဒေသ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ် အတွင်းရှိ တပ်ဆင်ထားသည့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား အမျိုး အစား အမျိုးမျိုးနှင့် တပ်ဆင်ထားသည့် ဒေသတို့ကို တည်နေရာ၊ တပ်ဆင်မှု (မဂ္ဂါဝပ်)နှင့် ထုတ်လုပ်မှု (ကီလိုဝပ်နာရီ)
ဇယား-၂၈။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ လျှပ်စစ် ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်
ဇယား-၂၉။ ပုဂ္ဂလိက စွမ်းအင်နှင့် သတ္တုလုပ်ကွက်များ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ ရေနံစိမ်း လုပ်ကွက်/ရေနံမြေများ၊ သတ္တုလုပ်ကွက်များနှင့် သတ္တု မဟုတ်သော လုပ်ကွက် များ၏ အမည်နှင့် တည်နေရာ
ဇယား-၃၀။ ပုဂ္ဂလိကစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ် အတွင်း ရှိ လုပ်ငန်းရှင်/ ကုမ္ပဏီီများ၏ ထုတ်လုပ်သည့် အရေအတွက် နှင့် ကုန်ကျစရိတ်
ဇယား-၃၁။ ပုဂ္ဂလိကသတ္တုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ သထ္တုတွင်းလုပ်ငန်းရှင်/ကုမ္ပဏီီများ၏ လုပ်ငန်းအမျိုးအစား၊သတ္တုတွင်းတည်နေရာ၊ထုတ်လုပ်သည့်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား များနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များ၊လုပ်သားဦးရေနှင့်လုပ်ခလစာများ(အချိန်ြပည့်/ အချိန်ပိုင်း)
ဇယား-၃၂။ တွင်းထွက်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်မှု။ အစီရင်ခံသည့်လတွင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ အဖိုးတန် တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ၊ သတ္တုနှင့်သတ္တုရိုင်းပစ္စည်းများ၊ တွင်းထွက် လောင်စာများနှင့် တွင်းထွက်စက်မှုကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကို အမျိုးအမည် အလိုက်ထွက်ရှိမှုအရေအတွက်
ဇယား-၃၃။ သတ္တုရိုင်းတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းဝန်ထမ်းများ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ် အတွင်းရှိ သတ္တုရိုင်းတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဝန်ထမ်း များအား မြေအောက်အလုပ်သမား၊ မြေပေါ် အလုပ်သမား၊ ဟင်းလင်းပြင် အလုပ်သမား စသည်ဖြင့် ခွဲခြားပြီး ကျား/မအလိုက် အခြေအနေ
ဇယား-၃၄။ ဆောက်လုပ်မှုအခြေအနေ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင်မြို့နယ် အတွင်းရှိ အိမ်ရာ ဆောက်လုပ်မှုများ၊ အသစ်ပြုပြင် ဆောက်လုပ်မှုများ၊ လမ်းဖောက်လုပ်မှုများ နှင့် တံတား တည်ဆောက်မှုများ
၈။ ပို့ဆောင်ရေးနှင်‌့ ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများ
ဇယား-၃၅။ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုအခြေအနေ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင်မြို့နယ်အတွင်း ရှိ မြန်မာ့မီးရထား၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်း၊ ပြည်တွင်းလေကြောင်းနှင့် ကုန်လမ်းပို့ဆောင်ရေး တို့မှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ခရီးသည်နှင့် ကုန်ပစ္စည်း ဝန်ဆောင်မှုများ၊ မြို့နယ် အတွင်း ရှိ မော်တော်ကားအရေအတွက်
ဇယား-၃၆။ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု။ အစီရင်ခံသည့်လတွင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ လိုင်းဖုန်း အသုံး ပြုမှု၊ မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုမှု၊ အင်တာနက် အသုံးပြုမှုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား ထပ်ဆင့် လွှင့်စက်ရုံအရေအတွက်
၉။ ‌ေငွရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများ
ဇယား-၃၇။ ဘဏ်များ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်း ရှိ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် နိုင်ငံပိုင် ဘဏ်များ၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဘဏ်များနှင့် သမဝါယမ ပိုင် ဘဏ်များနှင့် ဘဏ်ခွဲအရေအတွက်
ဇယား-၃၈။ ငွေရေးကြေးရေး ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ/ လုပ်ငန်းများ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ ငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှု ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ငွေရေးကြေးရေး ဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီ/ လုပ်ငန်းများ အရေအတွက်
ဇယား-၃၉။ နိုင်ငံပိုင်/ပုဂ္ဂလိကပိုင် အာမခံလုပ်ငန်းများ ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ် အတွင်းရှိ အာမခံလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် နိုင်ငံပိုင်/ ပုဂ္ဂလိကပိုင် အာမခံလုပ်ငန်း များ အခြေအနေ
ဇယား-၄၀။ အလိုအလျောက်ငွေထုတ်စက်စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက် နေသောဘဏ်များ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ အလိုအလျောက်ငွေထုတ်စက်စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသော နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များ၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဘဏ်များနှင့် သမဝါယမပိုင် ဘဏ် များ နှင့် ဘဏ်ခွဲ အရေအတွက်
ဇယား-၄၁။ မှတ်ပုံတင်၍ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောအပေါင်ဆိုင်လုပ်ငန်းများ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်၍ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိ သော အပေါင်ဆိုင်လုပ်ငန်းများနှင့်ဝင်ငွေ အခြေအနေ
ဇယား-၄၂။ ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်းရှိဌာန အဖွဲ့အစည်း များ၏ ရသုံးခန့်မှန်း ခြေငွေစာရင်း အခြေအနေ
ဇယား-၄၃။ ကဏ္ဍအလိုက်နိုင်ငံတော်အသုံးစရိတ်များ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကဏ္ဍအလိုက် နိုင်ငံတော်အသုံးစရိတ်များ အခြေအန
ဇယား-၄၄။ ဝန်ကြီးဌာနအလိုက်/ဦးစီးဌာနအလိုက် နိုင်ငံတော် အသုံးစရိတ်များ ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ် အတွင်းရှိ ဝန်ကြီးဌာနအလိုက်/ ဦးစီးဌာန အလိုက် နိုင်ငံတော် အသုံးစရိတ် များ အခြေအနေ
ဇယား-၄၅။ အခွန်အကောက်ရငွေစာရင်းပေါင်းချုပ်။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ် အတွင်းရှိ ပြည်တွင်းထွက်ကုန်နှင့် ပြည်သူပြည်သားများသုံးစွဲမှု အပေါ်တွင် ကောက်ခံသည့် အခွန်၊ ဝင်ငွေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှု အပေါ်တွင် ကောက်ခံသည့်အခွန်၊ နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့်အပေါ် ကောက်ခံသည့် အခွန်၊ စည်ပင် သာယာရေး အဖွဲ့မှ အခွန်များ ၊
၁၀။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများ
ဇယား-၄၆။ မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ အရ ဆောင်ရွက် လျက် ရှိသည့် လုပ်ငန်းများ ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ် အတွင်း ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ သား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ အရ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းများ နှင့် ယင်းတို့၏ နှစ်အတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏ
ဇယား-၄၇။ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုး အခြေအနေ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်း ရှိနှစ်အတွင်း တိုးချဲ့သည့် မတည် ငွေရင်းနှင့် နှစ်အတွင်းတိုးချဲ့ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုများ
ဇယား-၄၈။ မြို့နယ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်နေသော ကုန်ပစ္စည်းများ၏ လက်လီဈေးနှုန်းများ ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ ဖြစ်ပေါ်နေ သော ကုန်ပစ္စည်းများ၏ လက်လီဈေးနှုန်းများ အခြေ အနေ ကို အပတ်စဉ် ဖြည့်သွင်းပေးရန်
ဇယား-၄၉။မြို့နယ်အတွင်း ရောင်းဝယ်နေသောကုန်ပစ္စည်းများ ၏လက်ကား စျေးနှုန်းများ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်း ရောင်းဝယ်နေသော ကုန်ပစ္စည်းများ၏ လက်ကား
ဇယား-၅၀။ ပညာရေးဆိုင်ရာ ညွှန်ကိန်းများ ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ ပညာရေး ဆိုင်ရာ ညွှန်ကိန်းများ အခြေအနေ
ဇယား-၅၁။ အခြေခံပညာကျောင်းနှင့် ဘုန်းတော်ကြီးသင်ကျောင်းများ။ အစီရင်ခံ သည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ အခြေခံပညာ ကျောင်းနှင့် ဘုန်တော်ကြီးသင် ကျောင်း များရှိ ကျောင်းဆရာ/ဆရာမများ၊ ကျောင်သား/ သူများ
ဇယား-၅၂။ ပုဂ္ဂလိက ကျောင်း၊ ကျောင်းဆရာ၊ ကျောင်းသား ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိက ကျောင်း၊ ကျောင်းဆရာ၊ ကျောင်းသား အခြေအနေ
ဇယား-၅၃။ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်နှင့် သိပ္ပံ ကျောင်း၊ ကျောင်းဆရာနှင့် ကျောင်းသား ဦးရေ အခြေအနေ။ အ စီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ အစိုးရ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ၊ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံ၊ စက်မှုလက်မှု နှင့်အခြားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာသင် ကျောင်း၊ တိုင်းရင်းဆေးသိပ္ပံ၊ရေကျောင်းသိပ္ပံ၊အားကစားသိပ္ပံ၊သူနာပြုအတတ် နှင့် နှီးနွယ်ရာဘာသာရပ်များ သင်ကြားသည့်ကျောင်း၊ တက္ကသိုလ်၊ဒီဂရီ ကောလိပ်များ၏ကျောင်း၊ကျောင်းဆရာနှင့်ကျောင်းသားဦးရေအခြေ အနေ
ဇယား-၅၄။ တက္ကသိုလ်အလိုက် နှစ်စဉ် မွေးထုတ်ပေးနိုင်မှု ဘွဲ့ရဦးရေ အခြေအနေ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ဘွဲ့အမျိုးအစားအလိုက် ဘွဲ့ရဦးရေ
ဇယား-၅၅။ ပုဂ္ဂလိက ကျောင်း၊ ကျောင်းဆရာနှင့် ကျောင်းသားဦးရေ အခြေအနေ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိကကျောင်း၊ ကျူရှင်လုပ်ငန်း၊ ဘော်ဒါဆောင် လုပ်ငန်း၊ Day Special ရှိ ကျောင်းဆရာနှင့် ကျောင်းသားဦးရေ
ဇယား-၅၆။ ပညာရေးအသုံးစရိတ်။ အစီရင်ခံသည့်လတွင်မြို့နယ် အတွင်းရှိ ကျောင်း အပေါ် အစိုးရအထောက်အပံ့၊ ပြည်ပအထောက်အပံံနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ၏အထောက် အပံ့
ဇယား-၅၇။ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ ပညာရေးဆိုင်ရာဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့အသုံးစရိတ်။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျောင်းများအား လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများ ၏ အထောက်အပံ့ များ
ဇယား-၅၈။ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာညွှန်ကိန်းများ ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင်မြို့နယ်အတွင်း ရှိ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ ညွှန်ကိန်း များ အခြေအနေ
ဇယား-၅၉။ ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံ၊ ဆေးပေးခန်းများ ။အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံ၊ ဆေးပေးခန်းများ အခြေအနေ
ဇယား-၆၀။ ကျန်းမာရေးဌာနများနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ် အတွင်းရှိ ဆေးရုံ၊ ဆေးပေးခန်း၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန၊ ကျောင်းကျန်းမာရေး အဖွဲ့များ၊ ဆရာဝန်၊ သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်၊ ကျန်းမာရေးမှူး၊ သွားဘက်ဆိုင်ရာ သူနာပြု၊ ကျန်းမာရေးကြီးကြပ် (၁)၊ ကျန်းမာရေးဆရာမ၊ သူနာပြု၊ သားဖွားဆရာမ၊ နှင့် ကျန်းမာရေးကြီးကြပ် (၁)စသည့် အရေအတွက်များ
ဇယား-၆၁။ ပဏာမ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနှင့် အခြေခံ ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းများ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်း၊မိခင် နှင့် ကလေးကျန်းမာရေးလုပ်ငန်း၊ ဒေသန္တရ ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်း၊ ကျောင်းကျန်းမာရေး လုပ်ငန်း၊ ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးနှင့် ပဏာမ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်း တို့၏ အခြေအနေ
ဇယား-၆၂။ ရောဂါကာကွယ်နှိမ်နှင်းရေးလုပ်ငန်းများ အခြေအနေ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ် အတွင်းရှိ ပိုးမွှားမှ တစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများ နှိမ်နှင်းရေး လုပ်ငန်း၊အဆုတ်ရောဂါနှိမ်နှင်းရေး လုပ်ငန်း၊ ကာလသား ရောဂါနှိမ်နှင်းရေး၊ အနာကြီးရောဂါ နှိမ်နှင်းရေးလုပ်ငန်း နှင့် မျက်ခမ်းစပ်နှင့် မျက်မမြင် ကာကွယ် ရေး လုပ်ငန်းများ အခြေအနေ
ဇယား-၆၃။ တိုင်းရင်းဆေးရုံ၊ ဆေးကုဌာန၊ ဆေးဆရာနှင့် ကုသသော လူနာများအခြေအနေ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင်မြို့နယ် အတွင်းရှိ တိုင်းရင်းဆေးရုံ နှင့် တိုင်းရင်းဆေး ကုဌာနများ အခြေအနေ
ဇယား-၆၄။ ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းများအခြေအန။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးလက် ကျန်းမာရေး ဌာန များတွင် ပြည်သူလူထု ရေကောင်းရေသန့်သုံးစွဲရေးလုပ်ငန်းနှင့် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ငန်းများ အခြေအနေ
ဇယား-၆၅။ သမဝါဝမအသင်းဆေးပေးခန်းများ အခြေအနေ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ် အတွင်းရှိ ဆေးပေးခန်း၊ ဆရာဝန်၊ သွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်၊ သူနာပြု၊ ဆေးဘက် ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်း၊ တိုင်းရင်းဆေးဆရာ၊ သားဖွား ဆရာမ၊ ကုသပေးသော လူနာအကြိမ်
ဇယား-၆၆။ ဆေးရုံဆေးပေးခန်းများစာရင်း။အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ ဆေးရုံ ဆေးပေးခန်းများ စာရင်း
ဇယား-၆၇။ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အထောက် အပံ့ အသုံးစရိတ် အခြေအနေ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ် အတွင်းရှိ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့အသုံးစရိတ် အခြေအနေ
ဇယား-၆၈။ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်။ အစီရင်ခံသည့်လတွင်မြို့နယ်အတွင်းရှိဆေးရုံများ ၏အစိုးရအထောက်အပံ့၊ပြည်ပအထောက်အပံ့နှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏အထောက် အပံ့များ
ဇယား-၆၉။ ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံ၊ ဆေးပေးခန်း အသုံးစရိတ်အခြေအနေ။ အစီရင်ခံသည့်လ တွင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ ဆေးရုံနှင့် ဆေးပေးခန်းများ၏ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အသုံးစရိတ် အခြေအနေများ
ဇယား-၇၀။ ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံ၊ ဆေးပေးခန်း များအခြေအနေ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံနှင့်ဆေးပေးခန်းများ၏ ဆရာဝန်၊ သူနာပြု၊ သားဖွားနှင့် အခြား အခြေအနေများ
၁၄။မြို့နယ်များတွင် ထားရှိရမည့် လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဆိုင်ရာ စာရင်းအင်း
ဇယား-၇၁။ လူမှုဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းများ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ် အတွင်းရှိ လူမှုဝန်ထမ်း လုပ်ငန်းများ ၏ ကျောင်း/ဌာနများ ရှိ ကျား/မ ဦးရေ
ဇယား-၇၂။ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ အသုံးစရိတ် အခြေအနေ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ် အတွင်းရှိ လူမှုအဖွဲ့ အစည်း များ၏ ကလေးများ၊ လူငယ်များ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်များ၊ မသန်စွမ်း သူများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများအပေါ် လူမှုကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေး ဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ အသုံးစရိတ် အခြေအနေ
၁၅။မြို့နယ်များတွင် ထားရှိရမည့် လူမှုစီမံကဏ္ဍဆိုင်ရာ စာရင်းအင်း အချက်အလက်များ
ဇယား-၇၃။ သာမန်ရငွေနှင့်အသုံးစရိတ်အခြေအနေ။ အစီရင်ခံသည့်လ တွင် မြို့နယ် အတွင်းရှိ သာမန်ရငွေနှင့် သာမန်အသုံးစရိတ်အခြေအနေ ( ဘဏ္ဍာနှစ် အလိုက် )
ဇယား-၇၄။ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းများ၏ လုပ်သားအင်အား၊ လုပ်ခလစာ နှင့် အသုံးစရိတ်များ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ လုပ်ငန်းအမျိုးအစား အလိုက် လုပ်သား ဦးရေ နှင့် အသုံးစရိတ်
ဇယား-၇၅။ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်း၊ သမဝါယမနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ အသင်း/အဖွဲ့များ၏ လစာနှင့် အခြားအသုံးစရိတ် များစာရင်း။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်း၊ သမဝါယမနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ အသင်း/ အဖွဲ့များ၏ လစာနှင့် အခြား အသုံးစရိတ်များ စာရင်း
ဇယား-၇၆။ လစာနှုန်းထားအလိုက် အလုပ်လုပ်သူအခြေအနေ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ လစာ နှုန်းထား အလိုက် အလုပ်လုပ်သော ကျား/မ ဦးရေ
၁၆။ အားကစားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများ
ဇယား-၇၇။ မြို့နယ်အတွင်းရှိ အားကစားဆိုင်ရာ အခြေအနေ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ် အတွင်းရှိ အားကစား နည်းများအခြေအနေ
ဇယား-၇၈။ အားကစားကွင်း၊ အားကစားရုံများ အခြေအနေ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ် အတွင်းရှိ အားကစား ကွင်းများ၊ အားကစားရုံများနှင့် ရေကူးကန်များ အခြေ အနေ
၁၇။ မီးသတ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများ
ဇယား-၇၉။ မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ မီးသတ်စခန်း၊ မီးသတ်စက်နှင့်ယာဉ်၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် စုစုပေါင်း
ဇယား-၈၀။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအခြေအနေ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ် အတွင်းရှိဟိုတယ်/ မိုတယ်/အင်း/တည်းခိုခန်း အမည်၊ အခန်း အရေအတွက် နှင့် ခုတင်အရေအတွက်
ဇယား-၈၁။ မီးလောင်မှုဆိုင်ရာအခြေအနေ ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ မီးလောင်မှု ဆိုင်ရာ အခြေအနေအား မီးလောင်သည်‌့အကြောင်းအရင်း၊ မီးလောင်မှုကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုများ အခြေအနေ
ဇယား-၈၂။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာညွှန်ကိန်းများ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ ပြစ်မှုအမျိုး အစား အလိုက် ပြစ်မှုများ၊ အကျဉ်းသားနှင့် အချုပ်သား အခြေအနေ
ဇယား-၈၃။ ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်မှု ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင်မြို့နယ် အတွင်းရှိ ယာဉ် မတော်တဆ ဖြစ်မှု အခြေအနေ
ဇယား-၈၄။ အာမခံလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအခြေအနေ။ အစီရင်ခံသည့်လ တွင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ အသင်း အဖွဲ့အစည်း များမှ ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများနှင့် အခြားကိုယ်တိုင် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ၏ အရေအတွက်
ဇယား-၈၅။ အခြားဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ။ အစီရင်ခံသည့်လ တွင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ အခြားဝန်ဆောင်မှု ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ အခြေအနေ
၁၉။အသားတင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများ
ဇယား-၈၆။ ကဏ္ဍအလိုက်အသားတင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှု တန်ဖိုး (နှစ်အလိုက် ဈေးနှုန်းများအရ)။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက် ဈေးနှုန်းများအရ ကဏ္ဍအလိုက် အသားတင် ထုတ်လုပ်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုး အခြေအနေ
ဇယား-၈၇။ ကဏ္ဍအလိုက်အသားတင်ထုတ်လုပ်မှု နှင့်ဝန်ဆောင်မှု တန်ဖိုး (၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုနှစ် ပုံမှန်ဈေးနှုန်းများအရ)။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကဏ္ဍအလိုက် အသားတင် ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုး အခြေအနေ
ဇယား-၈၈။ အခြားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ အသင်း အဖွဲ့ အစည်းများမှဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများနှင့် အခြား ကိုယ်တိုင် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ၏ အရေအတွက်
ဇယား-၈၉။ ကုန်စည်ဒိုင်များစာရင်း။ အစီရင်ခံသည့်လတွင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကုန်စည်ဒိုင်များ၏ ရောင်းချသည့် ကုန်ပစ္စည်းများစာရင်း
ဇယား-၉၀။ မြို့နယ်အတွင်းသို့အခြားမြို့နယ်များမှ ဝင်ရောက်သော ပစ္စည်းများ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်းသို့ အခြားမြို့နယ်များမှ ဝင်ရောက်လာသော ကုန်ပစ္စည်းများအရေ အတွက် နှင့် တန်ဖိုး
ဇယား-၉၁။ မြို့နယ်မှအခြားမြို့နယ်များသို့ရောင်းချသောပစ္စည်းများ။ အစီရင်ခံသည့်လတွင် မြို့နယ်အတွင်းမှ အခြားမြို့နယ်များသို့ ရောင်းချသော ပစ္စည်းများ၏ အရေအတွက် နှင့် တန်ဖိုး
၁၁။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်တမ်းစာရင်းအင်းများကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှိရန်နှင့် မြန်မာစီးပွားရေး ဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ တိုးတက်ရေးအတွက် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည့် “မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်တမ်း (၂၀၁၅)” ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလနောက်ဆုံးအပတ်မှ စ၍ ဒီဇင်ဘာလ တတိယပတ်အထိ ကောက်ယူခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါစစ်တမ်းသည် စီးပွားရေး ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင် ပါဝင်သည့်ကဏ္ဍအားလုံး (စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၊ ငွေရေးကြေးရေး ကဏ္ဍနှင့် ပြည်သူ့ရေးရာကဏ္ဍများမှအပ) လုပ်ငန်းများအားလုံး၏ စာရင်းအင်း အချက်အလက် များကို နှစ်စဉ်ဆက်တိုက် ကောက်ယူမည့် ပထမဆုံး စစ်တမ်းဖြစ်ပါသည်။
၁၂။ အမျိုးသားစာရင်းအင်းများ တွက်ချက်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ မူဝါဒများရေးဆွဲရာတွင် သတင်း အချက်အလက်များပေးနိုင်ရန်နှင့် အခြားလိုအပ်သည့်ကိစ္စရပ်များတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက်ရည်ရွယ်၍ ကောက်ယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်တမ်း(၂၀၁၅) သည် ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ် (UNDP)နှင့် အီတာလျံစာရင်းအင်းဌာနတို့၏ ထောက်ပံ့ ကူညီမှုဖြင့် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာန(ယခင်အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် စီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနတို့ ပူးတွဲဆောင်ရွက်သောစစ်တမ်းဖြစ်ပါသည်။
၁၃။ အိမ်ထောင်စုဝင်ငွေနှင့်စားသုံးမှုစစ်တမ်း၊ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလက်မှုစစ်တမ်း အစရှိသည့် စစ်တမ်းများကိုလည်း အခါအားလျော်စွာဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၁၄။ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့သည် ကမ္ဘာ့ဘဏ် (World Bank)၊ ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ်(UNDP) တို့နှင့်ပူးပေါင်း၍ မြန်မာနေထိုင်မှု အခြေအနေစစ်တမ်း (၂၀၁၆-၂၀၁၇) (Myanmar Living Conditions Survey – MLCS) ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအထိ တစ်နှစ်ပတ်လုံး တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အသီးသီးရှိ မြို့နယ်များတွင် ကောက်ယူမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤစစ်တမ်းသည် ဗဟို စာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ (၅) နှစ်တစ်ကြိမ် ကောက်ယူသည့် စစ်တမ်းတစ်ခု ဖြစ်သည့် အိမ်ထောင်စုဝင်ငွေနှင့် စားသုံးမှု စစ်တမ်း (Household Income and Expenditure Survey – HIES)၊ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်နှင့် ယခင်အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှုဝန်ကြီးဌာန တို့ ပူးပေါင်း ကောက်ယူခဲ့သည့် အိမ်ထောင်စုစားဝတ်နေရေး အခြေအနေဘက်စုံ လေ့လာမှု စစ်တမ်း (Integrated Household Living Conditions Assessment – IHLCA)၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် ယခင် အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်း ကောက်ယူခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် နေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း (Myanmar Poverty and Living Conditions Survey – MPLCS) တို့ကို ပူးပေါင်း၍ ကောက်ယူမည့် စစ်တမ်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါစစ်တမ်းကို ကောက်ယူခြင်းဖြင့် –
– တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် နေထိုင်မှုအခြေအနေကို သိရှိနိုင်ပြီး၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင် (Sustainable Development Goals – SDGs) အတွက်လိုအပ်သော ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ၊ ညွှန်ကိန်းများရရှိနိုင်ရန်
– တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက်၊ မြို့နယ်အလိုက်၊ မြို့မ/ကျေးလက်ခွဲခြား၍ စားသုံးသူ စျေးဆနှုန်း (CPI) တွက်ချက်ရာတွင် အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်
– အမျိုးသားစာရင်းစနစ် (System of National Accounts – SNA) တွက်ချက်ရန် အတွက် စားသုံးမှုကုန်ကျစရိတ်ကို ခန့်မှန်းနိုင်ရန်နှင့်
– ရေရှည်စစ်တမ်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဌာနဆိုင်ရာမှ စစ်တမ်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သူ ဝန်ထမ်းများ၏ စစ်တမ်းလုပ်ငန်းအပေါ် သီးသန့်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် အရည် အသွေး ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်စေရန် စသည့်အကျိုးကျေးဇူးများ ဖြစ်ပေါ်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းအင်း အချက်အလက်များမှန်ကန်ရေးနှင့်အရည်အသွေးပြည့်ဝရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
၁၅။ စီမံကိန်းများနှင့်မူဝါဒများမှန်ကန် စွာချမှတ်နိုင်ရန်၊ ထိရောက်စွာ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန်၊ စောင့်ကြည်လေ့လာရန် နှင့် သုံးသပ်နိုင်ရန်၊ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝရေးကိစ္စရပ်များအား သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ၊ Stake -holders များနှင့် ထိရောက်စွာပူးပေါင်း ဆောင် ရွက်နိုင်ရေးအတွက် “တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းအင်း အချက်အလက်များမှန်ကန်ရေး နှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝရေးကော်မတီ” ကို(၅-၇-၂၀၁၆ )ရက်နေ့တွင် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဌာနဆိုင်ရာများပါ၀င်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးမှ ဥက္ကဌ၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ တိုင်းတာဝန်ခံမှ အတွင်းရေးမှူး တို့အဖြစ် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
တိုင်းဒေသကြီး မွေးဖွားမှုနှင့် သေဆုံးမှု မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း
၁၆။ မွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှု စာရင်းအင်းများ မှန်ကန်စွာရရှိပြီး သဘာ၀အလျောက် လူဦးရေတိုးနှုန်းနှင့် ဖွားသေစာရင်းအင်းညွှန်ကိန်းများ မှန်ကန်စွာတွက်ချက် ခန့်မှန်း နိုင်ရန်အတွက် “တိုင်းဒေသကြီး မွေးဖွားမှုနှင့် သေဆုံးမှု မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ “ အား ဖွဲ့စည်းရန် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ အခြေအနေများကို သုံးသပ်လေ့လာရာတွင် လည်းကောင်း၊ စီမံကိန်းများချမှတ်ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ သုတေသန လုပ်ငန်းများ၊ မူဝါဒချမှတ်သူများအတွက် လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာ ညွှန်ကိန်းများသည် လွန်စွာမှ အရေးပါအသုံး၀င်လျက်ရှိနေပါသည်။ ဗဟိုစာရင်းအဖွဲ့အနေဖြင့် ဖော်ပြထားသော စာရင်းအင်း ဆိုင်ရာညွှန်ကိန်များ၊ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ၊ကိန်းဂဏန်းများကို တိကျမှန်ကန်စွာ ထုတ်ပြန် ဖော်ပြနိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဌာန အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိနေပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ မိမိတို့၏ ဌာနနှင့် သက်ဆိုင် သော လူမှုစီးပွား ဆိုင်ရာ စာရင်းအင်း အချက် အလက်များ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေး ဆိုင်ရာ အညွန်းကိန်းများအား စာရင်းအင်း အချက် အလက် တိကျမှန်ကန်စွာ ထည့်သွင်း ဖော်ပြနိုင်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူတို့၏ အကျိုးအတွက် များစွာ အထောက်အကူပြု နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။